Mụaka na Mee N'onwe Gị, otu esi eme ihe eji egwuri egwu nke gị - Ikkaro
Ihe eji egwuri egwu
Ysmụaka bụ isi ihe mmụta maka ụmụaka. Onye obula tolitere na ihe egwuru egwu, obuna na mba na enweghi ego, ebe oburu na ha enweghi ihe eji egwuri egwu, eji ihe obula ha nwere mee ya.
Echiche nke ịnwale Mee N'onwe Gị nke ihe eji egwuri egwu ma ọ bụ otu esi eme ihe eji egwuri egwu n'onwe gị bịara n'ụbọchị m chọpụtara ọrụ nke Arvind gupta 6 afọ gara aga, na a TED okwu. Onye India na-echepụta ihe a raara nye na ịmepụta ihe eji egwuri egwu site na ihe eji emegharị ihe na ihe nketa ya dị oke mma.
Na Ikkaro, anaghị m elekwasị anya na isiokwu a, mana imepụta ihe eji egwuri egwu dị mfe site na nke eji arụ ụlọ, nke a na-emegharị na nke a na-enweta n'ụzọ dị mfe bụ ihe mara mma nke ukwuu na achọrọ m ịkọwa ya n'ụzọ miri emi karị.
Ọ bụrụ na Arvind kwuru, sị:
Ihe kachasị mma nwatakịrị nwere ike iji ihe ụmụaka ji egwuri egwu mee bụ ịkụda ha
M ga-agbakwunye na mgbakwunye na imebi ha, mee ha. Hapụ ya ka ọ rụpụta ha. Ọ bụ ụzọ mmụta nke onwe, mkpali na ihe okike.
Echetaram mgbe m di obere, ihe obula m jiri mpempe akwukwo, kaadiboodu, osisi, okwute na iberibe umu ihe egwuregwu ndi ozo….
LEGO Boost bu ihe eji eme ihe maka umuaka site na mpempe LEGO.. Ọ dakọtara na ọdịnala LEGO na Techno, yabụ ị nwere ike iji iberibe gị niile na mgbakọ ndị ọzọ.
N'oge ekeresimesi a, ndị amamihe atọ ahụ nyere nwa m nwanyị dị afọ 8 LEGO® Boost. Eziokwu bụ na ahụrụ m ya ntakịrị oge. Achọghị m iwebata nwa m nwanyị na nsogbu dị mgbagwoju anya, mana ọ na-arịọ maka ya ogologo oge na eziokwu bụ na ahụmịhe ahụ dị ezigbo mma.
A na-akwado ya maka ụmụaka site na 7 ruo 12 afọ. Ọ bụrụ na ụmụaka gị ejiri egwu LEGO mara, nzukọ a agaghị eweta nsogbu ọ bụla. You ga-ahụ na n’etiti ngosipụta nke ngwa ahụ yana ụfọdụ nkọwa sitere n’aka gị, ha ga-amụta ozugbo iji mmemme ngọngọ.
Ọnụ ya dị ihe dị ka € 150 ị nwere ike zụta ya ebe a.
Nsogbu kachasị m achọtaworo na LEGO Boost robot bụ na dabere na ngwaọrụ (mbadamba ma ọ bụ smartphone) ... Nọgidenụ na-agụ ihe
Otu esi eme uzo di egwu site na CD
Anyị na-aga wuo aruru ulo mee site na iji ya megharia ya. N’okwu a, anyị ga - eji CD ochie ma ọ bụ DVD ndị anaghị aba uru ọzọ. Obu oru diri umuaka. Ọfọn na ụmụ anyị, ma ọ bụ na omumuihe na ụlọ akwụkwọ, ụlọ akwụkwọ oge okpomọkụ, wdg.
Anyị nwere ike iji ọrụ ahụ mee ọtụtụ ihe, kọwaa ihe a gyroscope na ọrụ na akụrụngwa ọ nwere ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ha pere mpe, anyị nwere ike ịkụziri ha ka ha jiri compass, ịkpụ na imegharị ihe. Ọ bụghị a spindị spinner :) ma n'agbanyeghị na o juru m anya site mabul version maka ịbụ spinning n'ihi na ihe karịrị 1'30 »
Isiokwu kewara abụọ n'akụkụ nke bụ ụzọ abụọ nke na-ewu nke spinning top. N'ime akụkụ 3 mbụ na nke dị mfe ejiri, CD / DVD, mabul na plọg. Nke abuo bu ulo ochie nke dabere na akwukwo ihe ndi ozo ma obu ihe kariri ime. ọ bụghị ọtụtụ, mana obere dabara adaba maka ụmụaka.
Agbalịrị m ịme vidiyo ;-)
Ndị na-atụ ogho, ihe egwuregwu ụmụaka ahụ ekwensu na-achụ ụmụaka niile na ụmụ nwanyị nzuzu ruo nwa oge na akụkụ a (na ndị isi nzuzu karịa ndị nkuzi) bịakwara Ikkaro. Ha nwere ahụ, nke a na-ejikarị ígwè ma ọ bụ plastik eme, na-agbakwunye na etiti nke ha na-agbagharị. Ngagharị a, n'ihi ihe ụfọdụ anyị masịrị ya.
Ha kwere nkwa inyere ADHD aka, mmụba nke ịta ahụhụ, mbelata nrụgide, wdg, ọ bụ ezie na ọ nweghị ihe gosipụtara. Ha enweela ike ịbanye na ndepụta nke ngwaahịa 20 kacha ere ahịa na Amazon. Ọrịa Spinner juru onye ọ bụla anya. Ọbụna ha nwere ọwa na Reddit ebe anyị ga-ahụ ọtụtụ ozi na-atọ ụtọ.
Fun arụrụ n'ụlọ spinning toy maka ụmụaka
N'ahịrị ụfọdụ ihe eji egwuri egwu na oru na anyị na-ahapụ ka i wee mee ha na nke gị ụmụ anyị ahapụ nke a egwuregwu ogho.
Ọ dị mfe ma nke ahụ nwere ike ime ka gị na ụmụ gị ma ọ bụ ụmụ nwanne gị nwee ọ haveụ.
Ọgwụgwụ nsonaazụ dị ka nke a.
Mobile egwuregwu ụmụaka
Amaghị m ma ọ bụrụ na egwuri egwu a nwere aha, mana ọ kachasị mma ịme ụmụaka na ụlọ.
Ọ dị mfe ma ha ga-ekpori ndụ na-eme egwuri egwu nke ha.
Na vidio ị nwere ike ịhụ otú o si arụ ọrụ na mmetụta ọ na-emepụta.
Technology n'ime a kinder egg
na Kinder iju nwanyi anya Ha bụ obere ọgwụ ndị ahụ na-ebute nwa ahụ ka anyị na-aga n'ihu ibu n'ime.
Oge ọ bụla m hụrụ otu Echere m na enweghi nwa bebiAchọrọ m ihe na-ezukọ na onye mere toy nke sitere n'ike mmụọ nsọ nke a post kwesịrị ekele.
Otu esi eji ọkpọkọ PVC mee ihe eji egwuri egwu
You chetụla jiri pvc pipes dị ka meccano iji wuo ihe ụmụaka ji egwuri egwu?
Ọfọn, anyị na-ahapụrụ gị ụfọdụ atụ nke ihe a ga-enweta.
N'ime ihe a niile, anyị nwere ike itinye mma agha, ihe egwu, egbe, tebụl, wdg, wdg.
Enwere ọtụtụ ụzọ iji mee èbè na otu ụbọchị anyị ga-ekwu maka otu esi eme èbè ụlọ. Mgbe m na-ekwu maka ịmịcha ọrụ ọkachamara ... Nọgidenụ na-agụ ihe